November 2019 - Business Centric Network (BCN)
Accounting, MSME Books
Special Account @ MSMEBooks
November 4, 2019 BCN Support
လုပ်ငန်းရှိ စာရင်းခွဲများကို သီးခြားခွဲခြားသတ်မှတ်လိုပါက Special Account ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ, လုပ်ငန်းရှိ ချေးငွေများကို သီးခြားခွဲခြားလိုပါက... Setting များကိုနှိပ်ပါ။ Chart of Accounts ကိုနှိပ်ပါ။ New Account ကိုနှိပ်ပါ။ Name တွင် ထားရှိလိုသော Acc အမည် Loan ကို ထည့်သွင်းပါ။ Group တွင် Liabilities ကို ရွေးချယ်ပါ။ Control Account တွင် Special Account ကို ရွေးချယ်ပါ။ Create ကိုနှိပ်ပါ။ Liability အောက်တွင် ထည့်သွင်းထားသော Loan Account ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ Loan နှင့်ပတ်သက်သော Special Account ကိုထည့်သွင်းတော့မည်ဆိုပါက... Special Accounts … Continue reading Special Account @ MSMEBooks
Tagged Special AccountsLeaveacomment
November 2, 2019 November 2, 2019 San Thida
Discount ပေးတဲ့အခါမှာ ဘာကြောင့်ပေးမှာလဲ။ ငွေရချင်တာလား၊ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းထွက်ချင်တာလား။ Cash Discount ငွေသားစီးဆင်းမှုမြန်ချင်တဲ့အခါ (ငွေပေါ်လျော့ဈေး အရပ်အခေါ်) မှာ Cash Discount လို့ခေါ်တဲ့ ငွေပေးတဲ့ အခါသက်သာခွင့် ခံစားလို့ရပါတယ်။ လက်ရှိ Super Market တွေရဲ့ Promotion Areaမှာ ရောင်းချနေတာ၊ ကုန်စည်ပြပွဲတွေမှာ ရောင်းနေတာမျိုးပေ့ါ။ Trade Discount ကုန်လက်ကျန်များနေလို့ မြန်မြန်ရောင်းချင်တဲ့ အခါ မှာ ၁၀ ခု ယူ ၁ ခုပေးတာမျိုး၊ ၃ ခု အထက် ဈေးတစ်မျိုး၊ ၁၀ ခု အထက် ဈေးတစ်မျိုးပေးတာမျိုးပေါ့။ #Thida@BCN
Tagged DiscountLeaveacomment
Sales Discount for Invoice Total (or) Commission များထည့်သွင်းခြင်း @ MSMEBooks
November 2, 2019 BCN Support
လုပ်ငန်းတွင် ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းဘောင်ချာ(Sales Invoices) များ ထည့်သွင်းရာတွင် Total Discount များနှင့် Commission များထည့်သွင်းလိုပါက... Sales Invoices ကိုနှိပ်ပါ။ New Sales Invoice ကိုနှိပ်ပါ။ Date တွင် ရောင်းချသည့် နေ့စွဲကို ရွေးချယ်ပါ။ Customer ကို ရွေးချယ်ပါ။ Item တွင် ရောင်းချသည့် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအမည်ကို ရွေးချယ်ပါ။ Qty တွင် ဝယ်ယူသည့် အရေအတွက်ကို ထည့်သွင်းပါ။ Price တွင် စျေးနှုန်းကိုထည့်သွင်းပါ။ Discount (or) Commission များပေးလိုပါက...discountတွင် အမှန်ခြစ်နှိပ်၍ Exact Amount ကို ဦးစွာရွေးချယ်ပါ။ Account တွင် Expense စာရင်းရှိ ပေးလိုသည့် အမျိုးအစားကို… Continue reading Sales Discount for Invoice Total (or) Commission များထည့်သွင်းခြင်း @ MSMEBooks
Tagged Trade DiscountLeaveacomment